रोटर हाउरको टर्किश फ्युट समलैंगिक प्राइड र मिल्केशेक उत्सवमा: मार्टिन भिजल्याण्ड
रोटर हाउरको टर्किश फलहरु समलैंगिक प्रलोभनमा र मिल्ककेक उत्सवमा
मा दायर सिमुलेशन, समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	29 जुलाई 2019 मा	•5टिप्पणिहरु
मलाई हिजो सोधिएको थियो कि यदि मैले रट्टर हाउरका फिल्महरू देखेको थिएँ। लेखकका अनुसार ती फिल्महरू ग्राउन्डब्रेकिंग फिल्महरू थिए। टर्की फल किनकि यसले यौन वर्जितहरू तोड्यो र अन्य फिल्म ठीक थियो। मैले दुबै चलचित्रहरू कहिल्यै देखेको छैन, किनकि मलाई हाइप्सको लागि एक प्रकारको प्राकृतिक घृणा छ, तर पक्कै पनि मलाई थाहा छ उनीहरूको बारेमा के हो। एउटा फिल्म कम्तिमा स्वतन्त्र यौन संस्कृतिको आरम्भको बारेमा थियो (एउटा जुन धेरै मानिसहरु आफैंको सम्बन्धको बारेमा यति चिन्तित छन्) र अर्को मुख्यतया एक प्रचार फिल्म हो जसमा '40-' 45 वरपर इतिहास पूर्ण रूपमा बनाइएको छ। मान्छे संग विश्वसनीय। यद्यपि, व्यक्तिहरू वास्तवमै ईतिहासमा आउँदैनन् र यदि कुनै फिल्म राम्रा-राम्रा कलाकारहरूसँग रोमान्टिक छ भने, इतिहासको त्यो संस्करण छिट्टै सत्य हुन्छ; विशेष गरी यदि तपाइँ (धेरै विश्वसनीय रूपमा) भन्नुहुन्छ कि यो एक 'आत्मकथा पुस्तक' मा आधारित फिल्म हो। त्यो चाल सधैं काम गर्दछ!
रेटर हौरले हप्ताको अन्त्यमा मृत्यु भयो र यति धेरै मानिसहरु 'एकछिन' मा त्यस्ता क्षणमा फर्कन्छन्। मैले कहिलेकाहीं सोधेँ:मानिसहरु लाई टिभि, समाचार, तर विशेष गरी चलचित्रहरू र प्रचार उपकरणको श्रृंखला हुन् भनेर थाहा पाउनु अघि कति लेख लेख्नु पर्छ?"यो धेरै मान्छे जस्तो लाग्छ कि टिभी, फिलिमहरु र सीरीज एक कहानी मार्फत विश्वास प्रणाली को कार्यक्रम को लागि पैर उत्कृष्टता हो (या उनि यसलाई गोपनीय बस बकवास या 'साजिश सिद्धांत')। म लेख्छु)। त्यसपछि हामी भ्रामक प्रोग्रामको बारेमा बोल्दैछौं जुन प्रायः लागू हुन्छ। यदि तपाईंले दोस्रो द्वन्द्वको इतिहासको अध्ययन गर्न मात्र समस्या पाउनुभयो र थाहा पाउनुहुन्छ कि युनिभर्सिटीको प्रिंस बर्नहर्ड र प्रिन्सिपल फिलिप दुवै एसएस वर्दीमा फोटो खिचेका छन् र यदि तपाई नाजी शासनसँग सम्पर्क देख्नुहुन्छ भने तपाईलाई थाहा छ कि आधिकारिक इतिहास वास्तविकतासँग पूर्णतया असंगत छ। केही चीज सही छैन! त्यसपछि तपाईं पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ कि चलचित्रहरू तपाईंको टाउकोमा एक निश्चित छवि, जुन वास्तविकताको साथ असंगत छ कब्जा गर्न पूर्व-निमन्त्रणा हो। यदि तपाईं चलचित्रमा जान चाहानुहुन्छ र यसलाई तपाइँमा आउन दिनुहुन्छ भने, तपाई आफैलाई मूर्ख हुनुहुन्छ।
रट्टर हौरले ती अग्रगामी फिल्महरूको सन्दर्भमा विचार गर्न 'वर्जित' शब्द आफै रोचक छ। अश्लील उद्योगले देखाउँदछ कि लोग सेक्स हेर्न चाहन्छन्। भनिन्छ कि धेरै नयाँ प्रविधिहरू पोर्न ईन्डस्ट्रीमा भएको कारोबारलाई समर्थन गर्दछ। कमसेकम त्यो नै हामीलाई 'समाचार' द्वारा भनिएको हो र त्यसैले हामी सोच्छौं कि यो सत्य हो। त्यसोभए तपाईं भन्न सक्नुहुनेछ कि सेक्सले राम्रो बिक्री गर्छ र त्यो अधिक वा कम टर्की फलोको सफलताको वर्णन गर्दछ; एक कहानी को साथ पहिलो (प्रकारको) सेक्स फिल्म। 'वर्जित' को अवधारणा, मेरो विचारमा, मुख्यतया एक आविष्कार गरिएको अवधारणा हो, किनकि यौन कालदेखि नै अस्तित्वमा रहेको छ र वेश्यावृत्ति संसारकै सब भन्दा पुरानो पेशा हो, त्यसैले 'वर्जित' को अवधारणा मुख्यतया त्यस्तो चीज हो जुन क्याल्भनिष्ट डच चर्चले गर्न नचाहेको कुरासँग केही गर्न सक्दैनथ्यो। यति खुल्ला कुराकानी। त्यो 'पाप' विचारहरू पनि भत्काइनु पर्‍यो, जस्तो थियो; त्यो कसरी व्याख्या देखिन्छ।
र यसैले शिक्षकहरु को अगली पीढ़ी एक ठाँउ बन्यो जहां यौन सम्बन्ध निषेध क्षेत्र ले लिया गएको थियो। यो आफैमा राम्रो छ, के यो तथ्यको लागि होइन कि त्यहाँ मानव कारक हो, जसको कारण सधैँ यो मामला हो कि जब साझेदारले अर्को व्यक्तिसँग सम्बन्ध राख्दछ, यसले अर्कोलाई असर गर्छ। त्यसैले तपाईंले सोच्न सक्नुहुन्छ कि यो कसरी मनोवैज्ञानिक काम गर्दछ। हामी यो सबै पत्रिकाहरू र समाचारहरूमा हेर्छौं जब गर्डन एक पटक फेरि "प्रेम दुख" छ वा सिल्वी अर्को "" "मा फेरि निराश हुन्छ। नि: शुल्क सेक्स जसमा 'ट्याबोस' भत्काइएको छ, त्यसोभए कि हामी पनि 'प्रेम' लाई सम्पर्कको सम्बन्धको साथ व्यवहारमा एकसाथ जान्न लाग्दैन। मानव मनोविज्ञानले स्पष्ट रूपमा अजीब र यौन काम गर्दछ र प्रेम स्पष्ट रूपमा अलग हुन्छ, तर फेरि एउटा टोली पनि बनाउँछ। या यहाँ केहि फरक छ फरक छ र मानव अवतार यस्तो तरिकाले प्रोग्राम गरिएको छ कि यो सधैँ एक असफलता मा परिणाम?
यदि तपाईं यो लेख त्यसपछि पढेको छ, त्यसो भए मैले सृष्टिको कथा बनाएर विकासको सिद्धान्तको बारेमा के सोच्न सक्छु। संक्षेपमा, म त्यो दृश्य हो कि हामी एक हो अनुकरणीय वास्तविकता बुझ्दछन् (बहु बहु अनुकरणका खेलाडीहरू), जहाँ मानव अवतार हेडमा मध्य प्रोसेसर (मस्तिष्कको रूपमा पनि चिनिन्छ) र डीएनए प्रकार्यहरू एक प्रकारको हार्ड डिस्क मेमोरीको रूपमा एक जैविक कम्प्यूटर हो। डीएनए स्मृति क्यारियर हो। विज्ञानले हाल कम्प्युटरमा मेमोरी उपकरणको रूपमा सिंथेटिक इन्जिनियरिङ डीएनए प्रयोग गर्दछ (हेर्नुहोस् यहाँ)। एक बतख चिसो घाम बाहिर चढेर पानीमा पस्छ र तुरुन्तै कुकुरलाई थाहा छ। त्यो त्यो बायो-कम्प्युटरको डीएनए मेमोरीमा छ। त्यसैले हाम्रो डीएनए मेमोरीले वास्तवमा हामीले हाम्रा पुर्खाहरूबाट प्राप्त गरेका कुराहरू पूरा गर्छ। त्यसैले त्यो सबै फन्टहरूमा लागू हुन्छ। यसको अतिरिक्त, हामी आफ्नो जीवनकाल को समयमा आफु को बारे मा जान्दछौं र यो हाम्रो डीएनए मा भण्डार गरिएको छ, ताकि कुल प्याकेज अगली पीढी मा जान्छ। रोगहरू हृदय रोग प्रत्यारोपण भएका बिरामीहरूका रूपमा चिनिन्छन्, उदाहरणका लागि, जो अचानक प्रत्यारोपण पछि डोनरको कलात्मक गुणहरू छन्। डीएनए मेमोरी सामग्री हो।
हाम्रा पुर्खाहरूको यौन स्वतन्त्रता हाम्रो डीएनएमा पनि एम्बेडेड गरिएको छ। उदाहरणका लागि, मेरो साथी थियो जसको आमाले सेक्सको माध्यमबाट जिउँदो कमाउनुभयो र जो पनि आफ्नो यौन अभिव्यक्तिमा नि: शुल्क थियो। उनले मलाई कुनै दया बिना आग्रह गरे कि म आफ्नो प्रेमिका संग सेक्स गर्न चाहन्छु। उनको लागि स्पष्ट रूपमा संसारमा सबै भन्दा सामान्य कुरा। शायद सबैको आधारभूत डीएनए कार्यक्रममा प्रोग्राम गरिएको एक किसिमको 'नि: शुल्क सेक्स' हो, किनकी व्यवहारमा धेरै 'प्रेम' को भावना को बावजूद सम्बन्ध मा विश्वासयोग्य हुन सक्दैन। जाहिर छ कि प्राथमिक ड्राइव (त्यो डीएनए कार्यक्रम) कहिलेकाहीँ बढी लाग्छ।
जहाँसम्म मलाई चिन्ता छ, हामी मानव अवतार (यस सिमुलेशनमा) को कृत्रिम रूप देखि बुद्धिमानी सुपर-जैव कम्प्युटरको रूपमा मान्न सक्छौं। धेरै टाढाको भविष्यमा, बायो उद्योगले नैनो मार्फत मानिसलाई पुनर्निर्माण गर्न कसरी सम्भवतः थाहा पाउनेछ र हामी यस विचारबाट अब आश्चर्यचकित हुनेछैनौं; अब यो शायद धेरैका लागि टाढा छ। एआई कार्यक्रम जो हाम्रो दिमाग-मध्य प्रोसेसरमा चलिरहेको छ (हेर्नुहोस् यहाँ) एक dualistic मोडेल संग प्रोग्राम गरिएको छ कि एक हात मा "प्रेम" को आवश्यकता हो (एक साथी संग एक कनेक्शन) र अर्को हात मा मुक्त हुन चाहन्छ।
यदि तपाईं मेरो लेखमा गल्ती गर्नुहुन्छ भने तपाईंले पाउनुहुनेछ कि 'सिमुलेशन जसमा हामी जिउँदछ' ('हामी कुन कुरा / खेल' एक राम्रो वर्णन हो) वास्तवमा द्विवादवादमा आधारित छ। यो निश्चित दिशामा खेलाडीहरूलाई निश्चित दिशामा आवश्यक छ "बिना मुक्त इच्छाको व्यवस्था।" त्यो स्वतन्त्रताको व्यवस्था अनुकरणमा सधैं अवस्थित छ। नि: शुल्क इच्छा बिना, सिमुलेशन सिमुलेशन हुने छैन (जसमा खेलाडीले आफैलाई छनौट गर्नुपर्छ), तर एक निर्णायक फिलिम (जसमा परिणाम पहिल्यै पहिल्यै तय गरिएको छ)। ध्रुवीकरणको साथ तपाईं (ब्याट्रीको रूपमा) गर्न सक्नुहुनेछ एक निश्चित दिशामा सिधा वर्तमान पठाउनुहोस् र अझै पनि निःशुल्क इच्छाको आदर गर्नुहोस्। मा धेरै लेखहरू यसकारण मैले यो सिमुलेशनमा बिल्डरहरू (/ बिल्डर टोली) द्वारा नियन्त्रित कसरी गर्ने भनेर व्याख्या गर्दछु।
यदि एआई प्रोग्राम (जुन मानव जैव मस्तिष्क प्रोसेसरमा चल्दछ) प्राय: केहि चीजहरूको सामना गर्नुपर्‍यो भने यसले यो विषयलाई दीर्घकालीन स्मृतिमा राख्नेछ। यो त्यसपछि जान्छ, ब्रेन मेमोरी (वर्किंग मेमोरी) बाट DNA मेमोरी ('हार्ड डिस्क') मा। त्यसोभए यदि 'समाचार' (तर वैकल्पिक मिडियाले पनि) हामीसँग स्वतन्त्र सेक्स, समलि .्गी गौरव वा पेडोफिलियाको बारेमा रिपोर्ट गर्दछ र हामी प्रायः यसको सामना गर्छौं भने त्यो विषय दयाको बिना हाम्रो डीएनए स्मृतिमा समाप्त हुन्छ। यो जेफ्री एपस्टेनको बारेमा रिपोर्ट वा पेडोफिलियाको बारेमा कुनै पनि रिपोर्टहरूमा लागू हुन्छ (जस्तै यस रिपोर्टबाट उनीहरुसँग भेटघाट गरेकी छिन्)। त्यसोभए यदि पाठकहरूले मलाई सोधे किन मैले हालसालै पेडोफिलियामा यति थोरै ध्यान दिएको छु भने तपाईले यहाँ उत्तर पाउनुहुनेछ, अर्थात्: जुन दिमागमा धेरै कुरा आउँदछ जुन DNA मेमोरीमा आउँदछ (हार्ड डिस्कमा / आधारभूत प्याकेजमा) मानव बायो अवतार ठीक त्यस्तै। त्यसोभए, के तुर्की फलको 'वर्जित' सफलताको साथ शुरू भयो, समलि sex्गी सेक्स र समलि Gay्गी गर्वको लागि बसाई स्वतन्त्र सेक्सको बस्तीमा जारी रह्यो। इन्द्रेणी प्रचार पछ्याईयो। प्रेरित मानवले अझै पनि एआई कार्यक्रमलाई सुधार गर्न सक्दछ (चेतना स्तरमा मानव अवतारको नियन्त्रणको कारण), तर नयाँ जन्मजात पुस्ताले यी सबै नवजात मानव अवतारको डीएनएमा आधारभूत प्याकेजको रूपमा छ। यो हार्ड डिस्कमा जस्तै थियो।
टर्कीको फल पीडितका सन्तानहरूका लागि, डीएनएमा जलाशयको आधारभूत मेमोरी प्याकेज पहिले नै थियो जुन सेक्समा थप स्वतन्त्रता चलाउँछ। निस्सन्देह त्यहाँ पनि डीएनएमा यसको विपरीत पोल हो, किनकी प्रत्येक पीढीले पनि 'प्रेम' को अवधारणासँग मिडियाको माध्यम, चलचित्र, संगीत र पत्रिकामार्फत सामना गरेको छ। यसैले polarity को डीएनए को माध्यम ले पनि प्रेषित गरिन्छ र हरेक नयाँ पीढी पनि उनको मीडिया प्रोग्रामिंग पैकेज संग यस नयाँ पीढी को सेवा को उन मीडिया को देखने को लागी जान्छ। समलैंगिक गर्वको सन्तानका सन्तानहरूका लागि आधारभूत प्याकेज पहिले नै एक निश्चित 'रंगीन सेटिङ' मा उपस्थित छ। यसैले एउटा नयाँ ट्याबू त्यस पीढीको लागि तोड्न सकिन्छ। यो पीडा छ जुन हामी हेर्न सक्छौं (फोटोहरू हेर्नुहोस्) यसमा नृत्य Milkshake त्योहार एम्स्टर्डम मा। तपाईं मध्ये केहि को लागि, संगठन र व्यवहार अझै पनि टकरावजनक र पागल हुनेछ, तर यो कारणले गर्दा तपाईं आफ्नो डीएनए मा एक फरक मूल प्याकेज प्राप्त गरेको छ। सबै भन्दा नयाँ पीढी इंद्रधनुष एजेन्डा तिर प्रोग्राम गरिएको छ। यही कारणले तपाईले हेर्नु भएको जस्तो वर्षाबन्दी देख्नुहुन्छ। यसलाई पहिले नै डीएनएमा जलाइएको छ, त्यसैले बच्चाहरूको अर्को पीडाले यसलाई आधारभूत कार्यक्रमको रुपमा लिन्छ।
त्यो इंद्रधनुषले यस दोहरीवादी सिमुलेशनको बिल्डरको प्रतीक बनाउँछ, जसले मानव अवतार हेरफराडाइट वा लिङ्ग-तटस्थको दिशामा परिवर्तन गर्दछ (जुन अब स्वयं प्रचारित छैन, तर राज्य नियन्त्रित प्रजनन) त्रासदी मानव। Transhumanumanism वास्तव मा मानव र एअरियू (यस मामला मा हामी यस अनुकरणीय वास्तविकता भित्र निर्मित को बारे मा कुरा गर्दै छन्) बीच बीच क्रमिक संलयन लागि खडा छ। अन्तिम लक्ष्य यो हो कि हामी लुक्सफरियन एआई मा हाम्रो स्वयं निर्मित एअर को साथ पूरी तरह मर्ज गर्छन र हाम्रो जैविक संरचना लाई अलविदा कहें (हेर्नुहोस यो आवश्यक व्याख्या)। यो उद्देश्य यो हो कि चेतना को उन मूल अवलोकन फार्महरु जुन यस सिमुलेशन को लागी (उन सबै सुलभ अवतारहरु को बीच) ले आफ्नो रचनात्मक शक्ति यस सिमुलेशन को निर्माण मा राख्नुहोस: लुसिफर। यही कारण हो कि अवतार को अगली पीढ़ी (जसको केहि अझै पनि पुन: शुरुवात र पहिले देखि आईवीएफ मार्फत अन्य को माध्यम ले पैदा भएको छ) को पहिले नै इन्द्रधनुष प्रोग्रामिंग र ट्रांसगेंडर / लैंगिक तटस्थ प्रोग्रामिंग को डीएनए मा हुनु पर्छ। यो निवास को माध्यम ले जलाया गएको छ। त्यसोभए जहाँ पनि तपाईंले हेर्नु भयो इन्द्रधनुष हेर्नुहोस्।
टर्क फलोंमा शुरु भएको प्रोग्रामिंग पीडित पीढीबाट जगेडा गरिएको छ, ताकि मूल डीएनए मेमोरी प्याकेज बिस्तारै निःशुल्क सेक्स, समलैंगिक सेक्सको माध्यम ले LGBTI एजेन्डामा बदल्न सकिन्छ। अर्को कदम pedophilia को स्वीकार र डीएनए प्रोग्रामिंग दाई, पुरुषहरु र पुरुषहरु संग पुरुषहरु संग महिलाहरु: इंद्रधनुष प्रोग्रामिंग। यो एक अस्पष्ट दोहोरो कार्यक्रम हो जुन हाम्रो डीएनएमा जलाइएको छ। दोहोरो, देवता बफाम, डबल-हेड ब्रेट: यस भाइरस सिमुलेशनको बिल्डरको लागि प्रतीक, लुसिफर।
स्रोत लिङ्क सूची: nos.nl, parool.nl
समलैंगिक प्राइड देखि गर्व एम्सटर्डम देखि LHBTI सम्म LHBTIQAPC र homophobic देखि ट्रांसफॉबिक सम्म
मिस स्पेन चुनावका लागि ट्राभगेंडर प्रचार अब मिस स्पेन एन्जेला पोंस मार्फत छ
हामी कसरी ठूलो परिवर्तन ल्याउन जाँदैछौं यदि 99% inanimate छ?
ट्याग: ग्राउन्डब्रेकिंग, सफलता, विशेष, फलफूल, समलिङ्गी, Hauer, LHBTI, सुन्तला, pedo, गर्व, रगर, सैनिक, taboo, टर्की, वैन
29 जुलाई 2019 मा 11: 56
29 जुलाई 2019 मा 21: 56
बताउनुहोस् दर्शन मासा कार्यक्रम गर्न सधैं एक हतियार भएको छ।
धेरै व्यक्तिहरू कुनै पनि चीज र सबै चीजहरूमा विश्वास गर्छन् किनकि तिनीहरूले यो आफ्नै आँखाले देखेका छन्। तपाईंसँग स्क्रू छ कि छैन एन्ड्रे कुइपरहरू?
यसका बारे जान्न नचाहने मेरा सहकर्मीहरूले प्राय: उनीहरूको टाउकोमा कोरिन थाले।
29 जुलाई 2019 मा 23: 32
नूह पछि, अर्को एक छ जो इन्द्रेणीको साथ बन्द। भन्नुहोस् (सैतान) वा एक्स भन्नुहोस्।
हामी वास्तवमै प्रभावित हुँदैनौं!
31 जुलाई 2019 मा 00: 21
4 अगस्ट 2019 मा 14: 14
निस्सन्देह यो तपाईको कुरा मा धेरै सत्य छ म सोच्दछु कि मूल मानिसहरु लाई पनि विश्वास गर्दछु जो अझै शक्ति / रोशनी / शैतानवादीहरु वा प्रभु / अन्नुनाकी इत्यादीका प्रत्यक्ष वंशजहरु द्वारा पूर्ण रूपमा प्रोग्राम गरिएको छैन यी प्रक्रियाहरू कति लामो समयदेखि हामीले लामो समयदेखि बिर्सेका र शताब्दीहरू भैरहेका छन्। व्यस्त छु ?! पुरानो नियम / तोरा आदि पढ्नुहोस् अश्‍लील सामग्रीको बारेमा कुरा गर्नुहोस्।
« Pedophile Jeffrey Epstein को neuroscientific अध्ययनहरू गहिरो विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एआई नेटवर्कमा एकीकृत हुन्छन्
किन मानिसजातिको एआईको साथ अमरत्व र फ्यूजन प्राप्त गर्न लोभ्याइएको छ »
कुल भ्रमण: 11.705.331
के त्यहाँ जेफ्री एपस्टेन केसमा टाउको घुमाउने छ?
राष्ट्रपति ओसामा op अमेजन जलिरहेको छ, पृथ्वीको फोक्सो आगोमा छ!
क्यामेरा2op अमेजन जलिरहेको छ, पृथ्वीको फोक्सो आगोमा छ!
हरे op किन ट्रान्सजेंडर 21 शताब्दीको लागि नयाँ आदर्श हुन्छ र विषमलैंगिक गायब हुन्छ
मार्टिन भिजल्याण्ड op अमेजन जलिरहेको छ, पृथ्वीको फोक्सो आगोमा छ!
1.615 अन्य सदस्यहरू सामेल हुनुहोस्